Moratta oo qarka u saaran inuu shaqo ka qabto kooxaha Milan ka dhisan – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Moratta oo qarka u saaran inuu shaqo ka qabto kooxaha Milan ka dhisan
Talaaddo, October, 23, 2018(HNN) Sida ay sheegayaan warar badan oo ka imaanaya gudaha Italy ayaa sheegaya in agaasimaha guud ee kooxda Juventus, Giuseppe Marotta uu aad ugu dhowyahay ku biiritaanka Inter Milan.
Moratta ayaa sidoo kale Juve u ahaa madaxa fulinta ka hor inta aysan maamulka sare ee Bianconer xilkaas ka xayuubin, waxaana shaqada kooxda guud ahaan uu faarujin doonaa maalinta khamiista ah ee soo aaddan.
Inkastoo uu kula jiro heshiis ah maamulaha guud, haddana waxaa la fahansanyahay in qanadaraaskaas la isku raacay in la burburiyo, waxaana uu fasax u heli doonaa inuu u dhaqaaqo halka uu rabo.
Corriere dello Sport ayaa werrineysa in 61-jirkan uu u ruqaansan doono kooxda Nerazzuri, halkaas uu ka qaban doono shaqada hadda uu hayo Juventus.
Calciomercato.com ayaa qudheeda baahisay arrintan, waxaana ay intaas ku dartay in milkiilayaasha Inter ay dhowaanahan si is daba joog ah ula soo xariirayeen Moratta.
Waxaa la filayaa in kooxda Giuseppe Meaza ku ciyaarta iyo Moratta ay heshiis gaari doonaan, iyadoo la rajeynayo in bisha January uu qaban doono shaqada Inter Milan ay wakiishaneyso ee ah agaasimaha guud.
Moratta oo qarka u saaran inuu shaqo ka qabto kooxaha Milan ka dhisan added by admin on 23/10/2018